Iza moa i Janet Chávez Santiago, hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 8 – 14 Avrily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2019 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Esperanto , Français, Español
Sary natolotr'i Janet Chávez
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Janet Chávez Santiago (@JanChvzSanti) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Janet Chávez Santiago no anarako ary avy amin'ny vondrom-piarahamonina Zapotec ao Teotitlán Del Valle, Oaxaca, Meksika aho.
Naharafitra fomba fampianarana karazan-teny Zapotec avy ao Teotitlán del Valle (ZTdV) ho fiteny faharoa aho, ary nanangana ihany koa fitaovam-pampianarana sady nampianatra lesona izay nantsoiko hoe “te ganiun dixza xtee Xigie”.
Tamin'ny taona 2013 izahay, tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Oniversiten'i Haverford tamin'ny alalan'ny profesora Brook Danielle Lillehaugen, nanomboka rakibolan-dresaka Zapotec ao Teotitlán Del Valle. Tamin'ny fandraketana ny teny izahay nitady ny fandraisana anjaran'ireo zanatany mpiteny ny ZTdV.
Nanomboka hita tsikelikely tao amin'ny sehatra nomerika ny fiteny Zapotec, tsy ilay avy ao Teotitlán ihany, fa ireo avy amin'ny fa ireo avy amin'ny tanàna hafa ao amin'ny Lemaka ihany koa, tahaka izany izao ny amin'ny rakibolan-dresaka amin'ny karazan-teny efatra avy ao amin'ny Lohasahan'i Tlacolula amin'ny alalan'ireo tetikasa tahaka ny @VocesValle / #UsaTuVoz, izay mandrisika ny mpiteny azy hanoratra amin'ny fiteniny amin'ny fampiasana ny Twitter ho sehatra fanaovana izany.
Amin'ity herinandro ity aho hizara torohay momba ny fiteny Zapotec avy ao Teotitlán Del Valle, sy hanao izay hampahita ireo tetikasa nifantohanay tamin'ny fanangonan-tahiry, fampianarana, ary ny fampiasana ny sehatra nomerika ao amin'ny fiteny Zapoteco, indrindra fa ilay karazany avy ao Del Valle. Ho ampiasaiko ihany koa ity sehatra ity hizarako torohay momba ny fihaonana, famelabelaran-kevitra ary atrikasa izay mifantoka amin'ny fampielezana ny fiteny zanatany sy ny fisian-dry zareo ireo ao amin'ny sehatra nomerika.